Lefkara Villa #4 BR#Indawo yokuqubha#indawo yomlilo#BBQ - I-Airbnb
Lefkara Villa #4 BR#Indawo yokuqubha#indawo yomlilo#BBQ
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguStavroula
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uStavroula iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-chalet yamatye enedama lokuqubha elele ezintabeni apho uyonwabela iimbono ezintle zeentaba ezijikeleze, ilali yaseKato Lefkara kunye nembono ekude yolwandle. Igumbi lokuhlala elicwangcisiweyo elivulekileyo elinendawo yomlilo kunye nomabonakude omkhulu osicaba kunye netshaneli zentambo. Ikhitshi leplanga elixhotyiselwe ngokupheleleyo ukupheka ukutya kwakho kwaye utye kwitafile yabantu abayi-8. Ipiyano entle kwiholo yokungena yabathandi bomculo. Amagumbi okulala ama-4 aneebhedi eziyi-160x200 kunye neeshawari ze-en suite ezihlala abantu abasi-8. Isitiya esihle esivuthiweyo.
Ilitye elenziwe nge-chalet enophahla lwamaplanga elele ezintabeni kwindawo ezolileyo engenazindlu. I-villa ye-200 sq. Imitha kwiplani ye-800 sq. Iimbono ezintle zeentaba, ilali yaseKato Lefkara kunye nembono ekude yolwandle. I-villa epholileyo eyenza uzive usekhaya. Ilungele ukuhlalisa ukuya kuthi ga kwi-8-10 iindwendwe. Kunokwenzeka ukuba kuhlaliswe abantu abadala/abantwana abongezelelweyo kwiibhedi ezisongwayo/iibhedi ngeendleko ezongezelelweyo.
Idama lokuqubha elishushu liziimitha ezisi-7 x 3.50, ubunzulu ukusuka kwi-90 cm ukuya kwi-140 cm egadini enemibono emangalisayo. Yemveli idityaniswe nezanamhlanje. Indawo yomlilo iyakufudumeza ngobusuku basebusika kwaye inikezela ngezothando. Ipiyano entle kwiholo yokungena yabathandi bomculo.
Igumbi lokuhlala elicwangcisiweyo elivulekileyo elinendawo yomlilo kunye nomabonakude omkhulu osicaba kunye netshaneli zentambo. Ikhitshi leplanga elixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, umpheki wombane, i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba, iketile yamanzi yombane, imicrowave, umenzi wekofu okhawulezayo kunye nesandwich grilliere. Zonke izitya, iiglasi, iiglasi zewayini, i-cookware kunye nezixhobo zinikezelwe ukupheka ukutya kwakho. Itafile yeplanga yokutyela ye-8.
I-villa inamagumbi okulala ama-4 aneebhedi zenkosi (ubukhulu be-160cmx200cm). Igumbi lokulala ngalinye linegumbi lokuhlambela eline-ensuite. Igumbi ngalinye lokulala kumgangatho ophantsi linebalcony enemibono emangalisayo kunye negumbi lokuhlambela le-en suite. Igumbi lokulala kumgangatho wokuqala lineshawari ye-ensuite kunye nombono omangalisayo!
Ilungele iintsapho okanye izibini ezifuna ukuchitha ixesha leholide kunye nabahlobo babo kwi-villa enazo zonke izixhobo. Kwakhona, kufanelekile ukuhlalisa izibini ezisandul’ ukutshata ezikhetha ukutshata eLefkara okanye kumtshakazi okanye umyeni onqwenela ukulungiselela usuku lomtshato wabo eLefkara.
Ngaphandle unokonwabela i-BBQ kunye ne-cyprus BBQ yendabuko ebizwa ngokuba yiFUKU. Kukho itafile enkulu yabantu abayi-12 kunye neebhedi ezi-2 zokuphumla ukuze ukonwabele umbono weentaba, ulwandle kunye neenkwenkwezi. Igadi enkulu emva kwendlu enemithi nengca. Ngaphambili unokonwabela ichibi lokuqubha kunye nepatio enkulu apho kukho iibhedi zelanga kunye neambrela.
Izixhobo: I-pool yokuqubha eshushu, i-barbeque, i-alarm system, i-alarm alarm system, i-wifi, i-flat screen ye-TV ye-intshi ezingama-55 kunye nemiboniso bhanyabhanya yaseYurophu kunye neMelika kunye namajelo, i-NETFLIX, indawo yokupaka, i-air-conditioning entsha kuwo onke amagumbi, ifenitshala yangaphandle, iibhedi zelanga, i-ambulera, ilinen yokulala, iingubo, iitawuli, iishampu, i-slippers, i-kitchenware, ukucoca imihla ngemihla / ngeveki (iindleko ezongezelelweyo).
Le ndlu ikwilali yaseKato Lefkara kufutshane neKtima Dafermou kwiimitha ezingama-500 ukuphakama, kwaye isembindini phakathi kwezixeko ezi-3 eziphambili zesiqithi, iNicosia, iLarnaka kunye neLimassol kunye nomgama we-33 k.m. malunga nesixeko ngasinye. Imizuzu eyi-7 kuphela ukufikelela kwindlela ephezulu ekhokelela kwizixeko ezi-4. Ulwandle lukumgama we-15 k.m kuphela. Isikhululo seenqwelomoya siseLarnaka.
Ukusuka endlwini ungahamba ukuya kwilali yaseKato Lefkara ekumgama weemitha ezingama-200. Kwakhona, ivenkile yeAlpha Mega ikwimizuzu esi-7 umgama wokuqhuba ovulwa iintsuku ezisi-7 ngeveki ukusuka ngentsimbi yesi-7 ukuya kweyesi-9 ebusuku. I-Ktima Dafermou ikumgama weekhilomitha kuphela.
Yindawo ezolileyo yokuphumla, kude neyona dolophu ingxolayo. Kusekufutshane kuzo zonke iidolophu kunye nolwandle kunye nesiqingatha seyure ukuqhuba imoto. Ungayonwabela imbonakalo entle ejikeleze indlu ekunika ukufikelela okungenamkhawulo ezintabeni, kwilali yaseKato Lefkata kunye nolwandle. Akufunekanga uphoswe ziinkwenkwezi ebusuku!
Kulo mmandla unokonwabela iilali ezintle zemveli ezincinci. Unokutyelela ecaleni kwelali yaseLefkara, iKato Drys, iVavla, i-Ora, i-Agioi Vavatsinias kunye neVavatsinia. EVavatsinia ekumgama wemizuzu eyi-15 ikhephu liyawa amaxesha amaninzi ngexesha lasebusika. Kwi-Kato Drys unokufumana iMyuziyam yeeNyosi kunye ne-Embroidery efanelekile ukutyelela.
Kwakhona, unokutyelela ilali yaseSkarinou apho kukho iidonki. Abantwana bayabathanda. IMazotos ikwimizuzu engama-20 kuphela apho unokutyelela iCamel Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Stavroula
Ndihlala ndifumaneka. Ungandifumana ngemiyalezo nangefowuni.